राजनीति - मेरो खबर -
३ न. प्रदेशको राजधानी बनाउन गरिएका प्रयासहरु । हाल सम्म गरिएका प्रयासहरु ३ न. प्रदेशको राजधानी हेटौडा बनाउने सम्बन्धमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर, र हेटौडा नगर पालिका समेतले निर्णय गरेका थिए । यसरि निर्णय हुँदा समेत निर्णय कार्यन्वयनका सम्बन्धमा प्रभावकारि कदम अगाडी बढन नसकेको अवस्थामा जन दबाब समुह,मकवानपुरको तर्फबाट मिति २०७४।५।१५ गते फेसबुक वालमा सुचना राखेर,फोन गरेर मिति २०७४।०५।१६ गते सर्बपक्षीय भेला आयोजना गरि सोही भेलाबाट १६ गते देखि नै सञ्चारका सबै माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, १७ गते काठमाडौमा पर्चा पम्प्लेट सवारि...
काठमाडौं, १३ असार । अल्का अस्पताल जावलाखेल काठमाडौंमा बुधवारदेखि उपचार गराईरहनुभएका नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता एवम पूर्व मन्त्री रामहरि जोशीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आज अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका संस्थापक मध्येका एक पूर्वमन्त्री जोशी हातगोडा चल्न छोडेपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो । भतिजा विष्णु जोशीका अनुसार नेता जोशीको मृगौलामा पनि समस्या देखिएकोले उपचार भैरहेको छ । ​ ...
आफ्नो पक्षमा जनमत बनाउन जोडतोडले लागिरहेका छन् । निर्वाचनको मुखमा दलहरुको प्रचारप्रसारले पनि राम्रै चर्चा पाउने भएको छ । यसैबीच यतिबेला तनहुँको एउटा प्रंसगले चर्चा पाएको छ । एमाले तनहुँको गढ मानिने भिमाद नगरपालिकाबाट एमाले मेयरका उम्मेद्वार रहेका मेखबहादुर थापाले प्रचारका क्रममा निकै प्रतिस्पर्धी मानिएको नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखको झण्डा समातेर फोटो खिचेपछि उक्त प्रसंगले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ । स्रोतका अनुसार बिहिबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा भिमाद न.पा. कांग्रेसबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार रहेकी इन्दिरा खनालसँगको भेटमा थापाले...
२८ बैशाख, काठमाडौं । फेसबुक र ट्वीटर जस्ता ‘सोसियल मिडिया’ मार्फत आफूले समर्थन गर्ने पार्टी र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार-प्रसार गर्ने र विपक्षीको उछितो काढ्नेहरुले आज मध्यरातपछि होसियार हुनुपर्नेछ । मौन अवधिमा एस.एम.एस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रचार प्रसार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको आचारसंहितमा उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार-प्रसार गर्न नहुने भएकाले मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता पनि मौन रहनुपर्नेछ ।मतदानको ४८ घण्टाअघिदेखि शुरु हुने मौन अवधिको आचारसंहिता उम्मेदवार र राजनीतिक...
दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताबीच भएको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार राति करिब ११ बजेतिर भएको झडपमा एमाले कार्यकर्ता कुलबहादुर तामाङको मृत्यु भएको हो । उनका बुवा स्थानीय तह चुनावमा खुलाबाट वडा सदस्यको पदमा उम्मेदवार हुन् । एमाले कार्यकर्ता बास बसेको ठाउँमा माओवादीका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा घटना भएको स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् । झडपमा जुगु निलकण्ठेश्वर माविका शिक्षकसमेत रहेका गौरीशंकर गाउँपालिका–२ का दिलबहादुर बुढाथोकी घाइते भएका छन् । घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेकाले उपचारका...
काठमाडौं – नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । योसहित उनी १२आैँ पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमलाई गच्छदारसहित ३ मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । १५ पुस ०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेर सत्ता–यात्रा सुरु गरेका गच्छदार २६ वर्षमा १२ औं पटक...
नेपालगन्ज – रूकुम चौरजहारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर पदमा उम्मेद्वारी दिन धेरै लागिपरेका थिए । तर, पार्टीले करिब एक महिनाअघि नेपाल बैंक लिमिटेडको जागिरबाट रिटायर्ड भएका बलबिर गोसाईँलाई टिकट दियो । ‘आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु र पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले उहाँले टिकट पाउनुभयो,’ कांग्रेस निकट एक कार्यकर्ताले भने, ‘पार्टीमा राजनीतिक लगानी गरेको भन्दा पनि चुनावमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिलाई टपक्क टिट्दा इमान्दार कार्यकर्ता ओझेलमा पर्ने अवस्था आयो।’ जीवनको लामो कालखण्ड ठेक्का पट्टा, व्यापार व्यवसाय र अन्य...
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्बाट हालै बाहिरिएको राप्रपाका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारमा फेरि प्रवेशमा तगारो तेर्सिएको छ ।सर्वोच्चको एकल इजलासको आदेशका कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नियमित कार्यभार समालेपछि महाभियोग विवाद सम्बोधन भएको विश्लेषणसहित सरकारमा फेरि सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरेको राप्रपालाई अन्तिम समयमा सोमबार दिउँसो सत्ता गठबन्धन नेतृत्वद्वारा नकारात्मक संकेत प्राप्त भएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पक्षले समालेका सबै मन्त्रालय नेपाल �...
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सोमबार वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शङ्कर भण्डारीमाथि नेकपा (एमाले) का कार्यकर्ताले तनहुँको भानुमा आक्रमणको प्रयास गरेको जनाएको छ । साथै नेपाली काँग्रेसबाट वडा नं १ का अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका आशबहादुर लामामाथि अभद्र व्यवहार गरेको भनी निन्दा गरेको छ । निर्वाचनका समयमा जिल्ला आएको भन्दै एमाले कार्यकर्ताले लमजुङबाट राजधानी फर्कने क्रममा डुम्रे बेँसीसहर खण्ड अवरुद्ध पारेर मन्त्री भण्डारीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको बताइएको छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार घटनास्थलमा तत्कालै पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले मन्त्री भण्डारीलाई...
काठमाडौँ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आजै सहभागी हुने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आज छलफल गरी गच्छदारले अहिले पार्टीको बैठक बोलाएका छन् । त्यही बैठकपछि उनको सपथग्रहण आज हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने छ । गच्छदारले यसअघि विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गच्छदारको कुराकानी गरेका थिए । गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित यस अघि कमल थापाले सम्माहलेको स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मा दिने विषयमा कुराकानी भएको स्रोतको भनाई छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष...
माओवादीका ५ केन्द्रीय सदस्यसहित १५ जनाले पार्टी छाडे, ‘माफिया र ठेकेदार’को डिजाइनबाट पार्टी चलेको आरोप
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट दिइएको उम्मेदवारीप्रति असन्तोष ब्यक्त गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका ५ केन्द्रीय सदस्य सहित १५ जना नेताहरूले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् । आइतबार सामुहिक राजीनामा दिंदै उनीहरूले माओवादी केन्द्र ‘माफिया र ठेकेदार’को डिजाइनबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा ‘अराजक’ उम्मेदवार बनाएको र ‘इतिहास बोकेका सच्चा इमान्दार योद्धाहरूलाई छुरा रोप्ने काम’ भएकले आफूहरूले पार्टी परित्याग गरेको उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन् । यसरी राजीनामा दिने केन्द्रीय सदस्यहरूमा रमेश...
काठमाडौं । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि रोक लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले विशेषाधिकार हनन् गरेको आरोप लगाएकी छन् । घर्तीले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगको क्षेत्राधिकार संविधानले तोकेको हुँदा सबैले आफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने पनि बताइन् । जेठ ४ गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेपछि संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै घर्तीले राज्यका सबै अंगहरु आफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्ने बताइन् । ‘संविधानले सबै अंगको कार्य स्पष्ट गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो...
काठमाडौं । मधेसी मोर्चाका नेताले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न र परिआएमा कठोर कदमसमेत उठाउन सुझाव दिएका छन्।न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भिडन्तकै क्रममा राष्ट्रपति र सभामुखसमेत ठूला दलको महाभियोगको निशानामा पर्न लागेको संकेत गर्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिले तटस्थ र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरे राज्यका सबै निकाय अस्तित्वविहीन हुने चेतावनी पनि दिए । संकट चुलिँदै गएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अभिभावकका रूपमा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा छलफल गर्न मोर्चाका नेताहरूलाई बोलाउनुभएको...
सभामुखसहित ठूला दलका नेता बैठकमा, महाअभियोगबारे टुंगो लगाउने
री दिए । एमाले राप्रपा लगायत विपक्षी दलले महाअभियोग कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएपछि बिहीबारको संसद बैठक बस्दै नबसि स्थगित गरिएको थियो । शुक्रबार बिहान १० बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्नुअघि महाअभियोगबारे सहमति खोज्न सभामुखले शिर्ष नेताको बैठक बोलाएका हुन् । ...
काठमाडौं, २१ वैशाख । चुनाव बहिष्कार गर्ने राजनीतिक दल र गुन्डा नाइकेहरू उपत्यकाको सुरक्षा चुनौती रहेको प्रहरीको निष्कर्ष छ । गुन्डाहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ भने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता/कार्यकार्यमाथि निगरानी सुरु गरेको छ । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । विप्लवका नेता–कार्यकर्ताहरू फौजी तालिमप्राप्त भएकाले उनीहरू प्रमुख चुनौती भएको प्रहरीले जनाएको छ । ‘चुनाव बहिष्कार गर्नेहरू नै उपत्यकामा सुरक्षाका प्रमुख चुनौती हुन्,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका निमित्त आयुक्त डिआइजी बमबहादुर...